तपाइँको द्रुत गाइड महामारी को समयमा जर्जिया मा एक भगदड योजना को लागी
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » गेस्टपोस्ट » तपाइँको द्रुत गाइड महामारी को समयमा जर्जिया मा एक भगदड योजना को लागी
तपाइँ पूर्व महामारी को दुनिया को बारे मा सबैभन्दा धेरै के याद गर्नुहुन्छ? यो प्रश्न कुनै पनी यात्रा उत्साही लाई सोध्नुहोस् र उनीहरु कती नयाँ शहरहरु, व्यञ्जनहरु, र संस्कृतिहरु को अन्वेषण गर्न को लागी मिस को बारे मा एक हल्ला मा जानेछन्। जबकि कोभिड -१ pandemic महामारीले हाम्रो जीवनका विभिन्न पक्षहरुमा असर पारेको छ, यात्रा योजनाहरुमा यसको प्रभाव बेवास्ता गर्न को लागी धेरै स्मारक छ।
जर्जिया, यसको जीवन्त वास्तुकला, असली परिदृश्य, र विविध इतिहास संग, घर मा बस्न बाट थकित भएका मानिसहरु को लागी भाग्न को लागी एक खजाना कोष प्रदान गर्दछ।
दक्षिण पूर्वी राज्य सुरम्य बस्तीहरु, रमणीय शहरहरु, र शहरी शहरहरु को एक एक्लेक्टिक मिश्रण सुविधाहरु।
यो हरेक यात्री को लागी स्टोर मा केहि छ।
तर यदि तपाइँ महामारी को समयमा जर्जिया को लागी एक यात्रा को योजना बनाइरहनुभएको छ, तपाइँ प्रश्नहरु र दुविधाहरु को एक धेरै को सामना गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।
के यो अहिले जर्जिया को यात्रा सुरक्षित छ? के म जर्जिया भ्रमण गर्न सक्छु यदि म पूरै खोपिएको छैन? के म सार्वजनिक स्थानहरुमा मास्क लगाउन आवश्यक छ? के म एक नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट राज्य मा प्रवेश गर्न को लागी आवश्यक छ?
यो मात्र प्रश्नहरु को एक झलक हो कि तपाइँको दिमाग पल पल्ट तपाइँ जर्जिया को यात्रा को बारे मा सोच्नु हुन्छ। यस ब्लग मा, हामीले जर्जिया मा एक सुरक्षित र रमाईलो भरी छुट्टी को आनन्द लिन को लागी आवश्यक सबै जानकारी क्यूरेट गरेका छौं। एक नजर गरौं।
जर्जिया मा वर्तमान COVID-19 स्थिति के हो?
जर्जिया मा पुष्टि COVID-19 संक्रमण को संख्या जुलाई 5, 2021 पछि वृद्धि भएको छ, जब राज्यले वर्षको सबैभन्दा कम औसत देख्यो। राज्यले पछिल्लो हप्तामा हरेक दिन औसत ,४०० नयाँ केस रिपोर्ट गरेको छ। त्यो एक 7,400x जम्प सात हप्ता पहिले बाट संख्या को तुलना मा छ।
लगभग 5,000 कोविड -19 बिरामीहरु विभिन्न जर्जिया अस्पतालहरुमा उपचार प्राप्त गरीरहेका छन्। राज्य मा स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरु सञ्चालनमा छन् उनीहरुको ICU क्षमताको% ०%.
के यसको मतलब यो हो कि तपाइँ जर्जिया को यात्रा बाट बच्नै पर्छ?
खैर, त्यहाँ यो प्रश्नको जवाफ दिने कुनै सजिलो तरीका छैन। यो एक राम्रो विचार हो महामारी को समयमा गैर जरूरी यात्रा को कुनै पनी रूप बाट बच्न। तर त्यहाँ तपाइँको सुरक्षा र भलाई सुनिश्चित गर्न को लागी तरिकाहरु छन्, भले पनि तपाइँ अहिले जर्जिया को यात्रा को लागी छनौट गर्नुहोस्।
जर्जिया मा यात्रा प्रतिबन्ध को बारे मा के?
यो लेखनको रूपमा, जर्जिया अमेरिका भित्र बाट यात्रीहरु को लागी खुला छ राज्यले भारत, ईरान, दक्षिण अफ्रिका, र चीन जस्ता केहि देशहरु बाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुलाई स्वागत गर्दैछ। साथै, त्यहाँ यात्रुहरु को लागी जर्जिया मा उनको आगमन पछि संगरोध बाट गुज्रनु पर्ने कुनै अनिवार्य आवश्यकताहरु छैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरु अझै पनी एक नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट (older२ घण्टा भन्दा पुरानो) आफ्नो आगमन मा प्रदान गर्न को लागी छ। त्यहाँ आन्तरिक यात्रीहरु को लागी यस्तो कुनै नियमन छैन।
धेरै पर्यटक आकर्षण, रेस्टुरेन्ट, पब, र अन्य गैर जरूरी व्यापार प्रतिष्ठानहरु खुला छन्। तर उनीहरु कम क्षमता मा संचालित छन्, र अतिरिक्त COVID-19 सुरक्षा उपायहरु तैनात हुन सक्छ। त्यस्तै गरी, सार्वजनिक यातायात धेरै शहरहरुमा सीमित क्षमता मा संचालित छ।
जर्जिया को लागी तपाइँको यात्रा को योजना कसरी गर्ने?
सुरु गर्न को लागी, तपाइँ याद गर्नु पर्छ कि महामारी संग सम्बन्धित यात्रा प्रतिबन्धहरु लगातार विकसित हुँदै छन्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ एक विश्वसनीय स्रोत बाट नवीनतम दिशानिर्देशहरु को जाँच गर्नुहोस्, जस्तै CDC को वेबसाइट। साथै, COVID-19 संक्रमण को स्थिति मा नजर राख्न को लागी स्थानीय समाचार हेर्नुहोस्।
यहाँ केहि अतिरिक्त सुझावहरु तपाइँ जर्जिया को लागी तपाइँको यात्रा को सबै भन्दा धेरै बनाउन मा मद्दत गर्न को लागी छन्:
कम ज्ञात गन्तव्यहरु मा जानुहोस्
तपाइँलाई कसैलाई यो भन्न को लागी आवश्यक छैन कि उपन्यास कोरोनाभाइरस लाई खाडीमा राख्ने सबैभन्दा राम्रो तरीका भीडभाड ठाउँहरु बाट टाढा रहनु हो। जर्जिया भ्रमण गर्ने धेरैजसो पर्यटकहरु एथेन्स र एटलान्टा जस्ता लोकप्रिय शहरहरु को लागी जानेछन्।
तर जर्जियासँग धेरै धेरै प्रस्ताव छ। यदि तपाइँ जर्जिया मा शान्त र एकान्त पर्यटक स्थलहरु को लागी खोज्दै हुनुहुन्छ, अफबिट शहरहरु, जस्तै Snellville र Dahlonega को भ्रमण मा विचार गर्नुहोस्। यी स्थानहरु तपाइँ जर्जिया को उत्कृष्ट आकर्षण को एक झलक दिनुहुन्छ जबकि तपाइँ एक आरामदायक गति मा तपाइँको छुट्टी को आनन्द लिनु हुन्छ।
तपाइँ पनि सवाना को विचित्र शहर वा तस्वीर सही गोल्डन टापुहरु को लागी एक यात्रा को योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाइँको यात्रा कार्यक्रम डिजाइन गर्नु अघि स्थानीय यात्रा प्रतिबन्धहरु जाँच गर्न नबिर्सनुहोस्।
मौसम जाँच गर्नुहोस्
जर्जिया लामो, तातो गर्मी र चिसो जाडो संग एक उपोष्णकटिबंधीय जलवायु को आनन्द लिन्छ। राज्य बारम्बार मेघगर्जन र चट्या्गको सम्भावना रहेको छ। साथै, मौसम भू -भाग को आधारमा फरक फरक हुन्छ।
यही कारणले यो सधैं एक राम्रो विचार को जाँच गर्न को लागी हो Snellville मा मौसम, Dahlonega, सवाना, र अन्य गन्तव्यहरु तपाइँ जर्जिया मा भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ। यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँ महामारी को बावजुद एक रमाईलो र तनाव रहित छुट्टी को आनन्द लिनुहुन्छ।
तपाइँको सुरक्षा को बारे मा सावधान रहनुहोस्
जबकि जर्जिया मा धेरै प्रतिष्ठानहरु अब अनिवार्य मास्किंग नीतिहरु हुन सक्छ, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ एक मास्क लगाउनुहुन्छ जब तपाइँ एक पर्यटक आकर्षण मा जानुहोस्। हात स्वच्छता र सामाजिक दूरी प्रोटोकल को पालन गर्न नबिर्सनुहोस्। यदि तपाइँ बाहिर खान को लागी जाँदै हुनुहुन्छ, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ रेस्टुरेन्ट लाई सुरक्षा उपायहरु को बारे मा सोध्नुहोस् कि उनीहरु हाल प्रयोग गरीरहेछन्।
चाहे तपाइँ एक हप्ता लामो पलायन वा एक छिटो सप्ताहांत पलायन को लागी खोज्दै हुनुहुन्छ, जर्जिया सबैको लागी केहि प्रस्ताव छ। तपाइँको यात्रा को योजना बनाउनु अघि नवीनतम यात्रा प्रतिबन्धहरु को अनुसन्धान गर्नुहोस्। अग्रिम मा मौसम पूर्वानुमान जाँच गर्नुहोस् तपाइँको यात्रा को दौरान कुनै अनावश्यक बाधाहरु बाट बच्न। साथै, कम ज्ञात गन्तव्य छनौट selfie- जुनूनी पर्यटकहरु बाट बच्न, र एक सुरक्षित र शान्तिपूर्ण छुट्टी को आनन्द लिनुहोस्।